ဆုတွေရရှိခဲ့တာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Film တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Jaguar! – AutoMyanmar
ဆုတွေရရှိခဲ့တာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Film တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Jaguar!
Luxury vehicle brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jaguar ဟာ ဆုပေါင်း ၇၀ ကို Jaguar F-PACE performance SUV နဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jaguar ရရှိခဲ့တဲ့ဆုတွေထဲမှာ World Car of the Year 2017, World Car Design of the Year 2017 အစရှိတဲ့ title တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
Jaguar F-PACE performance SUV has won 70 awards, including World Car of the Year 2017 and World Car Design of the Year 2017.
World Car of the Year 2017 title ကိုတောင်ရရှိထားတယ်ဆိုတော့ ၂၀၁၇ ဟာ Jaguar ရဲ့နှစ်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။ ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Jaguar ဟာ film တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က Jaguar youtube channel မှာတင်ခဲ့တာပဲပါ။ Film မှာတော့ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ model ဖြစ်တဲ့ F-pace ရဲ့ပြင်ပ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကို ထင်းနေအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ Video ကြည့်ပြီးရင်တော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းက တော်တော်ပြည့်စုံနေတာကို ငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကတော့ Jaguar ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းက ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Ian Callum ဆိုသူရဲ့ပြောကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ World Car of the Year 2017, World Car Design of the Year 2017 အစရှိတဲ့ title နှစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကလည်း Jaguar ရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းရော ဒီဇိုင်းပိုင်းရော မလွတ်တန်းအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့လို့သာဖြစ်ပါတယ်။
AWARD WINNING JAGUAR F-PACE PAINTED IN A NEW LIGHT https://t.co/h9eMZBFLBH pic.twitter.com/wc69IfuFRl
— The-Auto (@TheAuto_co) December 16, 2017